Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Hangari News » Gegada Diyaaradaha ee Budapest: Run Run Runtii Sagaalaad!
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • News • Waajib ah • Sports • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Garoonka diyaaradaha ee Budapest ayaa sidoo kale qaban doona tartan si loogu ogolaado 100 kale oo nasiib u leh inay ka qeyb galaan tartanka iyada oo loo marayo abaalmarin abaalmarin ah oo lagu dhawaaqi doono warbaahinta bulshada ee garoonka waqti dambe.
Iyadoo la waafajinayo xaaladaha jinsiyada, iyo la kulanka shuruucda amniga iyo amniga, garoonka diyaaradaha ayaa mar kale marti gelin doona orodka gaarka ah.
Dhacdada warshadaha gaadiidka hawada sanadkaan sadaqada-isboorti waxay ka dhici doontaa Sabtida 18ka Sebtember 2021 garoonka diyaaradaha Budapest ee 13R-31L.
Lacagta ka soo baxda sanadkaan waxaa wadaagi doona kooxda naafanimada Hungary ee SUHANJ! Aasaaska iyo hay'adda samafalka caalamiga ah ee kansarka dhiigga, Anthony Nolan.
Ka dib markii loo aqoonsaday inuu yahay Anthony Nolan Urur-uruuriyaha Urur ee Sanadka, Madaarka Budapest iyo anna.aero waxay xaqiijiyeen in sanadkaan warshadaha gaadiidka cirka dhacda sadaqada-sportive ka dhici doonto Sabtida 18ka Sebtember 2021 wadada diyaaradaha Budapest ee 13R-31L.
Markii la ururiyey lacag dhan ,220,000 2013 oo sadaqo ah tan iyo 10, lacagta ka soo baxda sanadkaan waxaa wadaagi doona kooxda naafada Hungary ee SUHANJ! Aasaaska iyo hay'adda samafalka caalamiga ah ee kansarka dhiigga, Anthony Nolan. Iyada oo dhammaan khidmadaha gelitaanka lagu deeqay hay'adaha samafalka ee la doortay, orodyahannada ka socda shirkadaha diyaaradaha, garoomada diyaaradaha iyo shirkadaha guud ahaan bulshada duulimaadka ayaa lagu martiqaaday inay ku biiraan kooxo ka socda shirkado caan ah iyo ciyaartoy ka socota SUHANJ! Aasaaska, tartanka oo ka koobnaan doona laba masaafo ordaya - 5km (afar dherer oo dheerar ah) iyo XNUMXkm.
Chris Dinsdale, Maamulaha Guud, Madaarka Budapest faallooyinka: “Marka lagu daro in lagu wada ordo deegaan u gaar ah, runway-ga garoonka diyaaradaha, kaqeybgalayaashu waxay sidoo kale taageeri doonaan dhowr sababood oo wanaagsan Anagu garoonka diyaaradaha ee Budapest waxaan aaminsanahay in masuuliyada bulshada ay muhiim tahay, sidaa darteed farxad weyn ayey noo tahay inaan ku biirno xoogagga ujeedooyinka ay mataleyso SUHANJ! Foundation iyo Anthony Nolan, sanadkii sagaalaad oo xiriir ah. ”
In kasta oo dhibaatooyinka aafadu ay kor u qaadday dhammaan bulshada duulimaadyada iyo bulshooyinka adduunka oo dhan, mudnaanta koowaad ee garoonka diyaaradaha ee Budapest waa in la sii wado taageeridda sababaha wanaagsan, xitaa in ka sii badan inta lagu jiro xilliyada imtixaanka. Iyadoo la waafajinayo xaaladaha jinsiyada, iyo la kulanka shuruucda amniga iyo amniga, garoonka diyaaradaha ayaa mar kale martigalin doona socodsiinta gaarka ah oo ah midka kaliya ee ugu weyn, oo gebi ahaanba ku xiran, garoonka diyaaradaha ee Yurub ee awood u leh inuu ballanqaado xiritaanka runway-ga saacadaha maalinta Sabtida.
Marka laga yimaado halganka baaxadda leh ee dhammaan, Madaarka Budapest wuxuu dayactiray dhaqankan wanaagsan sanadkii la soo dhaafay wuxuuna ururiyey ku dhowaad € 20,000 iyadoo ay uga mahadcelinayaan ka qayb qaadashada ku dhowaad 600 orodyahanno. Waxaan u aragnaa inay tahay door muhiim ah inaan sii wadno lacag uruurinta oo aan rajeyneyno inaan ku soo dhaweyno dhammaan taageerayaasheena daacadda ah, iyo sidoo kale orodyahannada cusub, sanadkeena sannadlaha ah, ”ayuu raaciyay Dinsdale.
Madaarka Budapest ayaa sidoo kale qaban doonta tartan si loogu oggolaado 100 kale oo nasiib u leh inay ka qayb galaan tartanka iyada oo loo marayo abaalmarin abaalmarin ah oo lagu dhawaaqi doono warbaahinta bulshada ee garoonka waqti dambe.